Backup Contact Plus, KeyPad Remote ary fampiharana hafa maimaim-poana hanandramana amin'ity faran'ny herinandro ity | Vaovao IPhone
Backup Contact Plus, Remote KeyPad ary fampiharana hafa maimaim-poana hanandramana amin'ity faran'ny herinandro ity
Eny eny, zoma ihany amin'ny farany! ary inona no fomba tsara kokoa hankalazana azy noho ny miaraka a fisafidianana fampiharana maimaimpoanas, ilay karazana izay matetika hitanao amin'ny alàlan'ny App Store vaovao nefa tsy te-handoa. Azonao atao izao ny mahazo azy ireo maimaim-poana, nefa tsy mandoa denaria iray akory.
Mazava ho azy, tsy maintsy maika ianao satria efa ho izao tolotra voafetra ny fotoana noho izany, manoro hevitra anao izahay hampidina azy ireo haingana araka izay tratra mba hahazoanao tombony amin'ny fihenam-bidy. Koa satria Vaovao IPhone Tsy azo antoka ny fahamariany amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, fa tsy taty aoriana satria tsy manome izany vaovao izany matetika ny mpamorona. Misintona ary mankafy manandrana fampiharana vaovao amin'ity faran'ny herinandro ity.
2 Fafao ny Contacts + Duplicates
3 KeyPad lavitra ho an'ny Mac
4 Hevitra fanarenana - tanana reflexology
Manomboka amin'ny fampiasana lehibe izahay, "Backup Contacts Plus", fampiharana izay, araky ny anarany dia mamela anao avereno atohy ny fifandraisana hiaro azy rehetra. Azonao atao ny mandefa an'io backup io amin'ny alàlan'ny hafatra na mailaka. Ary azonao atao ny mamerina ny fifandraisana aminao amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanokafana ilay rakitra .vcf voaray fotsiny. Ankoatr'izay, manolotra fiasa hafa koa izy io, fa havelako hahita ireo ny tenanao amin'ny faran'ny herinandro ity.
"Backup Contacts Plus" dia manana vidiny 2,29 euro mahazatra, nefa azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Fafao ny Contacts + Duplicates
Manohy amin'ny fitaovana hafa iray izahay amin'ny fitantanana ny fifandraisanao ary avy amin'ilay mpamorona mitovy amin'ilay teo aloha, Jonathan Teboul. Ity dia «Delete Delete Contacts + Duplicates», fampiharana ahafahanao manao mitadiava, manambatra na mamafa ireo fifandraisana izay misy dika mitovy haingana sy mora. Ho fanampin'izay, azonao atao ihany koa ny manao kopia voafafa ary mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana avy amin'ilay rindrambaiko mihitsy, koa raha tara ianao tamin'ny tolotra teo aloha dia fotoana tsara hafa ity.
"Delete Contacts + Duplicates" dia misy vidiny mahazatra 1,09 euro, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao.
KeyPad lavitra ho an'ny Mac
«Remote KeyPad for Mac» dia fampiharana tena ilaina satria ovay ho lasa keyboard ho an'ny Mac ny iPhone, iPad na iPod. Azonao atao ny manitatra ny kitendry an'ny Mac anao miaraka amin'ny fiasa fitendry nomerika mba hidirana mora kokoa amin'ny isa kokoa. Saingy azonao atao ihany koa ny mamakivaky ny lahatsoratra, takelaka fampisehoana lavitra, ary mifehy ny Mac anao lavitra aza.
"Remote KeyPad for Mac" dia misy vidiny mahazatra 1,09 euro, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao.
Hevitra fanarenana - tanana reflexology
Hankany amin'ny fampiharana hafa tanteraka izahay ankehitriny, izay mifandray amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny tena manokana. Izy io dia "teboka fanarenana - tanana reflexology", fampiharana izay aseho ho karazana sarintany misy ny «teboka mavitrika biolojika» aseho miaraka amin'ireo hetsika tsy maintsy ampiharina amin'izy ireo hanatsarana ny fahasalamantsika. Ny lakile dia ao amin'ny Reflexology, fifehezana mandinika ny fifandraisana misy eo amin'ireo teboka ireo sy ny faritra hafa amin'ny vatan'olombelona amin'ny fomba iray, amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ireo teboka ireo, dia misy vokatra fitsaboana miavaka!
Nilaza ny mpamorona azy fa noho ny «isa fanarenana - tanana reflexology» azontsika atao manatsara ny fiasan'ny ati-doha, mampitombo ny herintsika, manafaka ny tenantsika amin'ny adin-tsaina, manala ny fanahiana, mitsabo tsy fahitan-tory, manatsara ny tsimatimanota ary mitovy manavesatra. Mmmmmm…. Tsy haiko, ny mpizara iray dia tsy matoky afa-tsy izay voafono, fa rehefa dinihina fa maimaim-poana dia afaka manandrana isika. Ary raha tsy mandeha izy, farafaharatsiny mba nanana fotoana nahafinaritra izahay.
"Teboka fanarenana - tanana reflexology" dia misy vidiny mahazatra 0,49 euro, nefa azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Ary namarana ny safidinay fampiharana maimaim-poana amin'ity faran'ny herinandro ity izahay miaraka amin'ny "Aftab Luminance", fampiharana iray natao manokana ho an'ireo izay hanao fialantsasatra, hanana hetsika na handeha haka sary fotsiny amin'izao andro izao.
Miaraka amin'ny «Aftab Luminance» azonao atao mamorona sary HDR izay isan'ny piksely mandrafitra azy dia mifanentana amin'ny sanda luminance tena izy. Ekeko fa very amin'ny teknika aho ka, raha azonao ny sary, zahao ary sintomy izany, satria ianao dia hanavotra eurazos sivy.
"Aftab Luminance" dia manana vidiny 8,99 euro mahazatra, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Backup Contact Plus, Remote KeyPad ary fampiharana hafa maimaim-poana hanandramana amin'ity faran'ny herinandro ity
GuevaraL dia hoy izy:
Mmm Aftab Luminance dia tsy maimaim-poana, kaonty 7.99 Euros = (
Valiny amin'i GuevaraL
Salama GuevaraL, «tolotra mandritra ny fotoana voafetra», araka ny efa nambarako tany am-piandohana. Tokony ho mailaka ianao satria ny mpandrindra manana fahazaran-dratsy ratsy dia tsy manondro fe-potoana farany, ary vitsy ny maningana. Amin'ny manaraka angamba! Tehirizo amin'ny lisitry ny fanirianao izany satria raha maimaim-poana indray dia hampahafantarinay anao.
Apple dia nanolotra dolara iray tapitrisa hanampiana ireo niharan'ny horohoron-tany tany Mexico
Apple TV 4K dia tsy milalao atiny UHD ao amin'ny YouTube